Mudaharaad ka dhacay Stockholm | Somaliska
Mudaharaad wayn oo ay ka soo qayb galeen ilaa 6,000 qof ayaa ka dhacay maqribkii Isniinka bartamaha Stockholm ayadoo dadka ay isugu soo bexeen in ay ka mudaharaadaan cunsuriyada iyo qaasatan soo gelida baarlamaanka ee xisbiga cunsuriga ee SD. "Waa muhiim in aan muujino in inta badan bulshada Sweden ay ka soo horjeedo cunsuriyiinta. Waxay igu noqotay layaab in ay heleen codod aad u badan" ayuu yiri Per Branevig oo ka mid ahaa dadkii ka soo qayb galay isku soo baxa. Abaarihii 6dii makhribnimo ayay isugu soo urureen isku soo baxayaashu goobta loo yaqana Sergels Torg ee ku taala bartamaha Stockholm, ayagoo lulaya qoraalo ay ka mid yihiin "Wadajir Haa, Cunsuriyad Maya" iyo "Ha u ogolaanina cunsuriyiinta baarlamaanka" iyo sida wiil soo gashaday funaanad ay ku qorantahay "Waxaan ahay Muslim, ha cararin". Isku soo baxa oo ahaa mid nabad ah ayaa la sheegay in ay soo agaasimtay gabar 17 sano jir ah oo Swedish ah oo lagu magacaabo Felicia Margineanu, ayadoo isticmaashay aalada Facebook si ay dadka warbixinta u gaarsiiso. Isku soo baxayaasha ayaa sida muuqatay aad uga niyad jabay natiijada doorashada oo uusan xisbina ku guuleysay aqlabiyad uu ku sameyn karo dowlad, ayadoo taasi ay keeni karto in cunsuriyiintu ay heleen furaha dowlad lagu sameyn karo ama in doorasho cusub lagu dhawaaqo haddii xisbiyada kale ay diidaan in ay la shaqeeyaan raysal wasaare Fredrik Reinfeld. Sidoo kale isku soo baxyo kale oo looga soo horjeedo cunsuriyiinta ayaa ka dhacay magaalada Goteborg. Waxaa loo balan sanyahay mudaharaad wayn oo ka dhaca magaalada Stockholm 4ta bisha Oktoobar ee soo socota.
Mudaharaad wayn oo ay ka soo qayb galeen ilaa 6,000 qof ayaa ka dhacay maqribkii Isniinka bartamaha Stockholm ayadoo dadka ay isugu soo bexeen in ay ka mudaharaadaan cunsuriyada iyo qaasatan soo gelida baarlamaanka ee xisbiga cunsuriga ee SD.
“Waa muhiim in aan muujino in inta badan bulshada Sweden ay ka soo horjeedo cunsuriyiinta. Waxay igu noqotay layaab in ay heleen codod aad u badan” ayuu yiri Per Branevig oo ka mid ahaa dadkii ka soo qayb galay isku soo baxa.
Abaarihii 6dii makhribnimo ayay isugu soo urureen isku soo baxayaashu goobta loo yaqana Sergels Torg ee ku taala bartamaha Stockholm, ayagoo lulaya qoraalo ay ka mid yihiin “Wadajir Haa, Cunsuriyad Maya” iyo “Ha u ogolaanina cunsuriyiinta baarlamaanka” iyo sida wiil soo gashaday funaanad ay ku qorantahay “Waxaan ahay Muslim, ha cararin”.
Isku soo baxa oo ahaa mid nabad ah ayaa la sheegay in ay soo agaasimtay gabar 17 sano jir ah oo Swedish ah oo lagu magacaabo Felicia Margineanu, ayadoo isticmaashay aalada Facebook si ay dadka warbixinta u gaarsiiso.
Isku soo baxayaasha ayaa sida muuqatay aad uga niyad jabay natiijada doorashada oo uusan xisbina ku guuleysay aqlabiyad uu ku sameyn karo dowlad, ayadoo taasi ay keeni karto in cunsuriyiintu ay heleen furaha dowlad lagu sameyn karo ama in doorasho cusub lagu dhawaaqo haddii xisbiyada kale ay diidaan in ay la shaqeeyaan raysal wasaare Fredrik Reinfeld.
Sidoo kale isku soo baxyo kale oo looga soo horjeedo cunsuriyiinta ayaa ka dhacay magaalada Goteborg.
Waxaa loo balan sanyahay mudaharaad wayn oo ka dhaca magaalada Stockholm 4ta bisha Oktoobar ee soo socota.